ကျွန်တော့်အဖေ(၄) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Creative Writing » ကျွန်တော့်အဖေ(၄)	7
Uncle Myo has written4post in this blog.
View all posts by Uncle Myo →	Blog
မောင်ပေ says: အန်ကယ်မျိုးတို့ အဖေ ခေတ်က ဓါတ်ပုံဆရာဆိုတာ အရမ်းရှားပါးတော့ တစ်ကယ်ကို လူတွေ လိုလိုလားလား လေးလေးစားစားနဲ့အကူအညီတောင်းကြမှာ ကို မြင်ယောင်မိတယ်ဗျာ
သန်းထွဋ်ဦး says: အင်းဗျာ ရှေးက ဖလင်အကြောင်းတွေ သိလို့ ကျေးဇူးပါ အန်ကယ်ရေ။
၀လုံး လေး says: ဟားဟား ….. အန်ကယ်မျိုးရေ
ကိုရင်မောင် says: အဲ့ဒီခေတ်ကဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ခွင့်ရမယ်ဆိုယင်
အရီးခင်လတ် says: ဒီနေ့ခေတ် ဓာတ်ပုံဆရာများ ကို လေးစား အထင်ကြီးပါသည်။
Uncle Myo says: ခုရက်မှာမိုးဆက်တိုက်ရွာနေတော့ ကျန်းမာရေးလဲ သိပ်မကောင်းဘူး၊ ဒါကြောင့် ဘယ်သူ့ကိုမှ
htoosan says: အန်ကယ်မျိုးရေ .. ကျန်းမာရေးတော့ ဂရုစိုက်ပါခင်ဗျ။
Comments By Postအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - uncle gyi - မောင် ပေကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - လုံမလေးမွန်မွန် - Mr. MarGaPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - uncle gyi - အရီးခင်လတ်ကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - လုံမလေးမွန်မွန် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - uncle gyi - TNAရပ်ကွက်မှသည် နိုင်ငံဆီသို. - garuda - garudaမောင်ပေ ရဲ့ ပုံတိုပတ်စများ - TNA - ခင် ခသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - လုံမလေးမွန်မွန် - Mr. MarGaနားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - လုံမလေးမွန်မွန် - အလင်း ဆက်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - လုံမလေးမွန်မွန် - Mobile13သူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အလင်း ဆက် - အလင်း ဆက်bin bo..........(ဘင်ဘို) - မိုး မင်းသား - TNAရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - GaviaGirl - Ma Eiအမုန်းတွေဝေး အပြုံးတွေပေးမယ့် ဒီည................................ - padauk moe - မောင် ပေတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - KZ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - Mr. MarGa - အရီးခင်လတ်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - Mr. MarGa - Mr. MarGaမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Mr. MarGaရထား ထွက်တော့ မယ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအဟံ ပထမံ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Phoe Thitsarလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - အရီးခင်လတ် - မွေ့ကေသာအိပ်မက်မင်းသမီး - Phoe Thitsar - KZဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ကြောင်ဝတုတ်East West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70521 Kyats )naywoonni (67257 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66748 Kyats )cobra (62183 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59030 Kyats )MaMa (57851 Kyats )Top Posts & Pagesဟေမာနေဝင်း ထောင်မှလွတ်နှင့် အခြားNews